यस्ता वने गरिव परिवारका घरविहीन वालक-Nagarikaawaj.com
यस्ता वने गरिव परिवारका घरविहीन वालक
सोमवार, साउन १०, २०७३
– युवा गायक जस्टिन बिबर अहिले विश्वका सेलिब्रेटीबीच नाम र दामका एक ज्वलन्त उदाहरण हुन् । संगित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थोरै वर्षमै, सानै उमेरमै जस्टिनले आफुलाई विश्वभर रहेका सेलिव्रेटीहरुको भिडमा अग्रंपक्तीमा उभ्याउन सफल भए ।
संसारैभरी रहेका करोडौं फ्यानहरुमध्ये उत्तिकै सख्याँमा जस्टिनलाई भेट्न लालायित हुनेहरु अथवा डाईहर्ट फ्यानहरुको सख्याँ पनि उस्तै छ । अझ, यिनै डाईहर्टफ्यानका लागी जस्टिनका भित्री रहस्य थाहा पाउनेहो अझ फरक अनुभुती गराउनेछ ।
१९९४ को मार्च १ मा जन्मीएका क्यानेडाली पप र आर एन्ड बी गायक, गीतकार तथा अभिनेता जस्टिन बिबरका वारेमा धेरैले सुनिरहनुभएकै छ ।
सानै उमेरमा संसारैभरीका संगितपारखीमाझँ लोकप्रिय वनिसकेका विवरका साना साना कुराहरुले पनि मिडीया तात्ने गर्छन् ।
उनका सामान्य कुरानै मिडीयामाझँ गसिप वन्न पुग्छन् । सुमधुर स्वरका धनि जस्टिनका फ्यानहरुको सख्याँ विश्वभर कति छन्, त्यो सहजै आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन, यद्यपी यो समाचार तयार वनाउँदासम्म उनको फेसवुकमा ७७ करोड ३९ लाख ८ हजार २ सय २२ जनाले पेज लाईक गरेका छन्, करोडौंको सख्याँमा ट्विटरमा फ्लोवर्स छन् । यि दुई सामाजिक सन्जाललाई आधार मान्नेहो भनेपनि जस्टिनका फ्यानको सख्याँ अर्ववढि सहजै पुगेको देखिन्छ । फेसवुक नचलाउने, ट्विटर नचलाउने अथवा सामाजिक सन्जालभन्दा वाहिर रहेकाहरु यद्यपी जस्टिनका फ्यानहरु अरुपनि भएकाले फ्यानहरु यत्तिनै छन् भन्ने एकिन गर्न गाह्रो पर्छ ।
जस्टिन, एउटा प्रतिभावान्, मिहेनती गायक मात्रै हैनन्, छोटो समयमै सर्वाधिक चर्चा र त्यही चर्चाको सिखरमा पुग्ने थोरै गायकमध्ये उनिनै पहिलो स्थानमा आउँछन् । जस्टिनका गित सुनेर मात्रै फ्यान भएकाहरु उनका भित्री रहस्य थाहा पाउनेहो भने थप आश्चर्यचकित तुल्याउने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
बीबर २००८ मा स्कुटर ब्रनद्वारा पत्ता लगाईएका हुन । कामकै शिलशिलामा युट्वमा खोल्न पुगेका व्रनका आखाँ एकाएक जस्टिनले अपलोड गरेको भिडीयोमा पुग्यो । उनले युट्युबमा बीबरको भिडियो हेरेका थिए र पछि उनैको प्रवन्धक वन्न पुगे । ब्रनले उनलाई अटलांटा, जर्जियामा अश्शर सँग भेट्ने व्यवस्था मिलाईदिए र बीबर रेमंड ब्रन मिडिया ग्रूप (आर बि एम जि), ब्रन र अश्शरको संयुक्त कम्पनि, सँग अनुबन्धित भए । र त्यस पछि एल. ए. रीडको प्रस्तावमा आइल्यान्ड रेकर्ड्ससँग रेकर्डिङ गर्ने मौका पनि पाए । बीबरको पहिलो एकल गीत, ‘वान टाईम’ २००९ माा निस्केको थियो । क्यानाडामा शीर्ष दसमा र धेरै अन्तराष्ट्रिय बजारमा शीर्ष तीसमा उक्लिन सफल भएको थियो । उनको पहिलो एल्बम, सात ट्रयाक भएको ‘माई वर्लड’, नोभेम्बर २००९ मा जारी गरियो । जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्ल्याटिनम प्रमाणित भयो । उनी आफ्नो पहिलो एल्बमबाट सातवटा गीत ‘बिलबोर्ड हट १००’ मा हुने पहिलो कलाकार बन्न पुगे ।
बीबरको पहिलो पुर्ण स्टुडियो एल्बम, ‘माई वर्लड २.०’, मार्च २०१० मा जारी भएको थियो ।
यो धेरै देशहरूमा नं. एक या शीर्ष दस भित्र पर्न सफल भएको थियो र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्ल्याटिनम प्रमाणित भएको थियो । यो एल्बमभन्दा पहिले बीबरको निक्कै चर्चित र संसारभरको शीर्ष दसमा पर्ने गीत, ‘बेबी’ निस्किएको थियो । ‘बेबी’ को भिडियो युट्युबमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै पटक हेरिएको र सबैभन्दा बढि चर्चा भएको भिडियोको रूपमा रहदै आएको छ ।
आफ्नो पहिलो एल्बम निकाले पछि बीबरले आफ्नो पहिलो टुर ‘माई वर्लड टुर’ गरे, रिमिक्स एल्बमहरू ‘माई वर्लड अकस्टिक’ र ‘नेभर से नेभर– द रिमिक्सेस’ निकाले । र, थ्रि डी कन्सर्ट फिल्म पनि जारी गरे । बीबरले आफ्नो दोस्रो स्टुडियो एल्बम, ‘अन्डर द मिसलटो’ नोभेम्बर २०११ मा निकाले । जस्ले ‘बिलबोर्ड २००’ मा नम्बर एकमा डेब्यु ग¥र्यो । विवरले यो सानै उमेरमा धेरै पुरस्कार पाएका छन् । २०१० को ‘अमेरिकी संगीत पुरस्कार’ मा वर्षको कलाकार र धेरै पुरस्कारको लागि नामांकित भएका थिए । त्यस्तै ५३ औं ग्र्यामी पुरस्कारमा सर्वश्रेष्ठ पप गायन एल्बम र सर्वश्रेष्ठ नयाँ कलाकारको रुपमा पनि उनी घोषित भए ।
साना उमेरका चर्चित गायक मानिने जस्टिनका वारेमा उमेर सानैभएपनि लेखेर, भनेर अथवा गुणगान गरेर पुग्दैन । यद्यपी धेरैथोरै भने यहाँनिर उल्लेख गर्न खोजीएको छ ।
जस्टिनलाई अहिले हेर्दा हामीले जस्तो महसुस गरेपनि उनको वारेमा पछि फर्किएर हेर्दा आफैलाई अचम्म लाग्छ । उनका कथा व्यथा उत्तिकै पिडादायक छन्, अहिले यो स्थितीमा आएपनि । जस्टिनको बाल्यकाल आजभन्दा ठीक उल्टो परिस्थितिमा गुज्रिएको थियो । उनी निकै गरिब र घरविहीन बालक थिए । संघर्षले केही वर्षमै जस्टिनलाई यो उचाइमा ल्याइदियो कि उनको बाल्यकाल बुझ्नेहरु अहिले जिब्रो टोक्छन् । अहिले जस्टिनको मासिक कमाइको हिसाब १ देखी डेढ करोडमा पुग्छ । जस्टिन केही वर्षमै रोडबाट करोडमा पुगे ।
चर्चित हुनुअघि म यस्तो घरमा थिएँ कि जहाँ धेरै मुसाको बास थियो । बिबरले केही समय अघि मिडीयामा भनेका थिए, –‘रातिमा खाली पेट कुनै पुलमुनि गएर सुत्थे, कहिले रोडमा पुगेर निदाउन खोज्थे ।’ ड्रम्स, गितार, पियानो मज्जाले वजाउन सक्ने जस्टिन दिनको ६ घण्टा लगभग सुन्ने गर्छन् ।